Xukun xakamaynta iyo astaamaheeda sharci | Dhaqaalaha Dhaqaalaha
Caddayn degdeg ah
Susana Maria Urbano Mateos | | Dhaqaalaha guud
Waa maxay rabitaan? Waxaa loola jeedaa nidaamka fulinta ama hab dhaqan galinta marka ay jiraan nidaamyo taxane ah oo la raaco oo cambaareynaya bixinta qaddarka lacageed.
Hadday tahay cashuur, alaab ama adeeg, tani waxay dhacdaa markii deyn bixiyahu kuma bixin lacag bixin waqtigii loogu talagalay sida ku xusan laba geesoodka. Waa marka lacagaha aan si ikhtiyaari ah loo bixin deyn bixiyuhu in xaddidaadda loo adeegsado sidii habraaca deynta hantida deynta ee deynta lagu soo ururiyo oo lagu dejiyo.
1 Waa maxay nidaamka fulinta?
2 Waqtiyada Kujira Baaq Degdeg ah
3 Astaamaha Astaamaha Degdegga ah
4 Saamaynta Soo-jeedinta Deg-degga ah
5 Maxay yihiin sababaha looga soo horjeedo amarka fulinta?
6 Ku saabsan la wareegida hantida iyo xuquuqda
Waa maxay nidaamka fulinta?
Sida caadiga ah Cashuur bixiyuhu waa inuu ku bixiyo deynta cashuurta ama cashuurta waqtigeeda, sida tan ayaa qeexay.
Tan macnaheedu waxa weeye in deyn bixiyuhu ku bixin doono deyntiisa muddo lacag bixin ah oo ikhtiyaari ah sida ay sidoo kale calaamadeeyeen canshuuraha tooska ah ama kuwa aan tooska ahayn.
Maqnaanshaha bixinta muddada lacag bixinta ikhtiyaari ah, deynta iyo koritaanka a dulsaarka la'aanta bixinta ugu dambayntiina way timaaddaa si degdeg ah.
Waxaa loo yaqaanaa nidaamka ururinta ama habka yaa leh fulinta waa qasab. Iyada oo taageero ka heleysa magaca fulinta ee ay soo saartay hay'adani dadwaynaha sidaasna ay ku sii soconeyso si ay u dhaqan gasho amaahdeeda sharciga dadweynaha iyada oo loo marayo fulinta shaqsi ahaaneed ee hantida deynta ama deynta.
Ficilkani wuxuu sharciyeeynayaa maamulka in laga hor tago hantida deynta lagu leeyahay.
Waxaa jira a 20% canshuur dheeri ah oo lagugu kordhiyo deynta, marka lagu daro tan, amarka degdegga ah ayaa dhalin doona "dulsaarka caadiga ah".
Dib udhaca ku yimid lacag bixinta awgeed deynta iska bixi. Haddii ay dhacdo in deynta la tirtiro kahor isgaarsiinta amarka fulinta, 20% canshuurta dheeriga ah ee deynta ayaa hoos loogu dhigay 10%, iyada oo aan laga soo saarin dulsaar bixinta xilli dambe.
Waqtiyada Kujira Baaq Degdeg ah
Nidaamka fulinta wuxuu bilaabmayaa markii ogeysiiska cashuur bixiyaha la ogeysiiyo. Waxay ku jirtaa amarka fulinta halka deynta la sugayo lagu aqoonsaday.
Gudaha dacwadaha xilliga fulinta waa la xaliyay iyo waajibaadka waxaa laga codsanayaa inuu bixiyo lacagta la sheegayo.
El xilliga fulinta ayaa bilaabmaya maalinta xigta waqtiga kama dambaysta ah ee muddada lacag-bixinta ikhtiyaari ah.
Marka muddada fulinta ay bilaabato, maamulku wuxuu ku bilaabi karaa nidaamka fulintaSi kastaba ha noqotee, kahor intaadan bilaabin waa inaad ogeysiiso ficil maamul oo loo yaqaan "amarka fulinta".
Isla taas oo loo qaadan karo inay tahay cinwaan ku filan in lagu bilaabo hawsha. Amarka fulintu wuxuu leeyahay isla miisaan iyo awood fulin sida “xukun maxkamadeedSidaas darteed iyada oo ay taasi jirto waa suurtagal in laga hor tago aabonimada cashuur bixiyeha ee la hadal hayo.
Astaamaha Astaamaha Degdegga ah
Sida laga soo xigtay LGT, sifooyinka nidaamka fulinta Waa kuwan soo socda:
Nidaamka fulintu waa mid keli keli ah oo maamul leh. Kaliya qeyb ka mid ah maamulka canshuuraha ayaa ah howsha xalinta dhacdooyinka ka dhex jira nidaamka fulinta, iyo sidoo kale fahamka kiiska gaarka ah.
Marka laga hadlayo isku duubnaantaada arrintan la xiriirta hababka kale ee fulinta. Nidaamka dhaqan galinta laguma dari karo nidaamyada garsoorka ama nidaam kale oo keena cadaadis.
Wadahadallada gudahood hababka fulinta gaarka ah. Xaaladahaas, suuxdinta ugu da'da weyn waxay noqon doontaa tan la doorbiday, kiiskan gaarka ah gudahiisa, tixgelinta kiiska waxaa lagu qaadi doonaa taariikhda dadaalka qabashada.
Isku soo wada duuboo hirgelinta caalamiga ah ama habsocodka musalafnimada. Haa, oo kaliya haddii amarka fulinta lagu soo saaray taariikh ka hor taariikhda caddeynta caymiska.
Nidaamka fulinta ayaa leh bilaabida iyo ujeedoyinka xafiiska dhammaan iyo mid kasta oo ka mid ah nidaamyadeeda.
La ka joojinta nidaamka fulinta waxaa lagu fulin karaa oo keliya iyadoo loo malaynayo in lagu bixiyey xeerka cashuuraha.
Kiis kasta oo lagu bixiyo qawaaniinta canshuuraha.
Haddii ay dhacdo in waajibku ku bixiyo deynta gebi ahaanba.
Haddii ay dhacdo in uu jiro qalad maadi ah oo ku saabsan waajibiyaha, ama qalad ku saabsan go'aaminta deynta.
Sababtoo ah xisbiyada saddexaad. Tani waxay dhacdaa markii dhinac saddexaad raadsado inuu ka qaado suuxdinta maxaa yeelay waxaa la fahamsan yahay inuu isagu iska leeyahay domain ama taas, iyadoo laga doorbidayo Khasnadda Dadweynaha, cidda saddexaad ee laga hadlayo waxay xaq u leedahay in laga soo celiyo deyntiisa.
Saamaynta Soo-jeedinta Deg-degga ah
Marka howsha fulintu bilaabato, saameynta laga fikirayo waa:
Maamulka canshuuraha ee laga hadlayo wuxuu awood u yeelan karaa oo laga yaabaa inuu ku dhaqmo awoodaha fulineed ee jira inta lagu jiro nidaamka fulinta. Tan si loo ururiyo deynta baaqatay, ee la fuliyay iyada oo loo marayo qabashada iyo fulinta damaanadaha. Caadi ahaan ficillada noocan ah ee fulinta laguma fulin karo isla marka la ogeysiiyo waajibaadka, muddo ayaa laga gudbayaa taas oo loo gudbin karo qawaaniin kasta.
Ku saabsan muddada gelitaanka. Ogeysiinta ka dibbixinta degdegga ah”, Waxaad fursad u heli doontaa inaad bixiso ama dejiso deynta. Sida la filan karay cashuur bixiyuhu wuxuu samayn karaa dakhliga wakhti kasta inta lagu jiro mudada fulinta, ilaa iyo inta ay tani dhaceyso kahor ogeysiinta amarka fulinta. Inkasta oo bixinta ay suurtagal tahay in la sameeyo, haddana waxaa jira kala duwanaansho ku saabsan bixinta lacagaha waqtiyo kala duwan, farqigaani wuxuu ku saleysan yahay dulsaarka xilliga fulinta iyo dulsaarka dib u dhaca, oo waajib ku ah waajibku inuu si buuxda u bixiyo.
Maxay yihiin sababaha looga soo horjeedo amarka fulinta?
Waxaa la dejiyey in aysan jirin sabab mucaaradnimo oo ka baxsan liistada soo socota oo sidaas darteed, looma qaadan doono sida Sababta looga soo horjeedo amarka deg-degga ah sabab kasta oo kale marka laga reebo kuwa soo socda:
Deynta waa la sifeeyey, waa la bakhtiiyey gebi ahaanba ama waxaa jira dawo qoritaan oo xaq u leh in la dalbado isla lacagtaas.
Ka soo horjeedka amarka fulinta ayaa suurtagal noqon doonta haddii ay dhacdo in uu jiro codsi dib-u-dhigis, magdhaw ama jajab inta u dhexeysa muddada lacag-bixinta ikhtiyaari ah ama sababo kale oo hakinta ah ay dhacdo.
Ka soo horjeedka amarka fulinta ayaa suurtagal noqon doonta haddii ay dhacdo in ay jirto ogeysiis la'aan ku saabsan deynta deynta.
Ka soo horjeedka amarka fulinta ayaa suurtagal noqon doonta haddii ay dhacdo in la joojiyo dareeraha.
Ka soo horjeedka amarka fulinta ayaa suurtagal noqon doonta haddii ay dhacdo in laga tago ama khalad ku jira waxyaabaha ka kooban amarka fulinta, isla qalad ama ka tagid taas oo caqabad ku ah aqoonsiga deynta ama xuduudaha si loo fahmo deynta.
Ku saabsan la wareegida hantida iyo xuquuqda
Qabsashadu waa inay dabooshaa oo keliya qaybta u dhiganta qiimaha hantida iyo xuquuqda ee daboolaya qiimaha deynta aan la bixin, dulsaarka dib u dhaca isku mid ah, lacagaha dheeraadka ah ee muddada fulinta iyo wixii kharash ah ee ku baxa nidaamka fulinta.
Si kadis ah Hantida ama xuquuqaha ay tiradoodu ka badan tahay qiimaha aan soo sheegnay waa inaan la qabsan.
Amarka qabashada. Amarkan, shuruudo gaar ah ayaa la dejiyaa oo go'aamiya amarka la raaco inta lagu jiro xayiraadda:
Heshiiska lala galay cashuur bixiyaha su'aasha laga qabo. Ilaa iyo inta uu cashuur bixiyuhu codsado, amarka habka qabashada waa la beddeli karaa, tan iyada oo aan dhinac la iska dhaafin in hantida la qabtay ay damaanad qaadeyso qiimaha iyo aruurinta, isla hufnaanta iyo sida ugu dhakhsaha badan ee suurtagalka ah, tan oo aan waxyeello u geysanayn dhinacyada saddexaad.
Haddii aan heshiis la gaarin, hantida waa la qabsan doonaa Ujeedadaas awgeed, hantidaas ka sahlan in la iibiyo ee ka qaalisan kooxda mas'uuliyadda waa la tixgelinayaa.
Inta lagu gudajiro saameynta cunaqabateynta, amarka soosocda ayaa laqaadi doonaa:
Lacag caddaan ah ama raasamaal ah oo lagu keydiyo hay'adaha deynta, haddii ay ka tirsan yihiin deynta.
Xuquuqda iyo dammaanadaha lagu xaqiijin karo muddada-gaaban, inta ay ka yar tahay 6 bilood.
Mushaharka deynta, mushaharka iyo hawlgabka.
Hantida ma guurtada ah ee deynta.
Danaha, dakhliga iyo miraha deynta.
Xarumaha warshadaha iyo ganacsiga ee deynta.
Waxyaabaha qadiimiga ah ee deynta, biraha qaaliga ah, dahablayaal, dhagxaanta wanaagsan iyo dahabka.
Hantida guurtada ah iyo tan shakhsiga ah ee deynta.
Xuquuqda iyo dammaanadaha lagu xaqiijin karo muddada dheer, ereygan ayaa ka badan lix bilood.
Hantida iyo xuquuqda la ogyahay waxaa lagu qabsan doonaa sida aan kor ku soo sheegnay., hase yeeshe, waxaa jira laba mooyee ama xeerar gaar ah oo hoos ku xusan:
Ugu dambeyntiina, hantidaas oo u baahan faragelinta lagama maarmaanka u ah degenaanshaha canshuur bixiyuhu wuu sii jiraa, tani waxay noqon kartaa alaabta guriga, dahabka, iwm. Ilaa iyo inta alaabadaasi ku jiraan gudaha guriga.
Noocyada hantida "aan lala xiriiri karin" sharcigu lama qabsan doono. Tusaalaha tani waa sanduuqa hawlgabka ama aalad lagu adeegsado ganacsiga, marka lagu daro tixgelinta qaybta mushaharka ama mushaharka ee lama taabtaanka ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Dhaqaalaha guud » Caddayn degdeg ah
Waa maxay hay'adda sharci?
Maalgelinta dulsaar la'aanta ah ee kaararka deynta